'ILIZWI' 5/11: NGUBANI OWONISE NGOKUNGOKU KWANGOKO GCINA? - IINDABA
‘Ilizwi’ 5/11: Ngubani oWonje ngokuhlwa ngokuGcina?
Phezolo, Ilizwi Abangeneleli babonisa ii-chops zabo zokuthetha njengoko babeqhubela abantu baseMelika kwilizwe liphela.
Ukuvota kule veki kuvulwe ukugqitywa komboniso wangoMvulo, obehlala, kwaye kwaqhubeka ngolwesiBini kusasa nge-7 kusasa nge-EST.
NgoLwesibini, nge-11 kaMeyi, uCarson Daly utyhile ukuba uCorey Ward ufumene ivoti engu-Instant Save.
Ngoku singena kwimidlalo yokuhlala, ikamva labakhuphiswano liphume kwiminwe yeejaji kwaye ababukeli banakho. Abalandeli banokuvotela ukuthanda kwakhe ngumboniso usetyenziso olusemthethweni , okanye ngokuqhubeka I-NBC.com/VoiceVote.
Kwabo bafuna ukuzihlaziya ngendlela ebesebenze ngayo ukuza kuthi ga ngoku, imvumi enababukeli ababalaseleyo bavota ngaphezulu kwesiqendu sangoMvulo, kwaye wonke umqeqeshi ufumene ukukhetha ilungu eliseleyo leqela labo ukuba liqhubele phambili. Emva koko, indawo yesithoba yanikezelwa kwimvumi yeKhadi lasendle, kwaye i-Top 17 yabhengezwa yi-Four-Way Knockout.
Ukuqhubela phambili, nantsi enye into onokuyazi:
UBlake Shelton kungekudala kudala watyhila ukuba emva kweminyaka embalwa kangaka yophicotho lwe Ilizwi , Ukholelwa ukuba umboniso ufumene okokugqibela umntu 'owaziwayo'.
Xa uCam Anthony wayecula iHozier ethi Ndise ecaweni ngoMvulo, uShelton wabhengeza, Andikaze ndibenabantu abongezelelekileyo bendibuza malunga negcisa kwiqela lam kumaxesha angama-20 okwenza lo mboniso, ndoda. Ungangoyena mntu ubalaseleyo odumileyo ukuba siqalise umboniso.
Kwiqela uBlake kwezi nyanga zili-12 nguJordani Matthew Young, Anna Grace, Pete Mroz, no-Anthony.
Ngokuya kwiwebhusayithi yeNBC , U-Anthony uneminyaka eli-19 ubudala kwaye uvela ePhiladelphia, ePennsylvania. Indawo ekubhalwa kuyo ibhala, uCam wakhulela eMantla ePhiladelphia kwaye wajika waba ngumculo njengendawo yokubaleka kugonyamelo nolwaphulo-mthetho awayejamelene nalo ngaphakathi komasipala omkhulu. Waqonda esemncinci ukuba ungalilawula njani ilizwi lakhe kwaye ubuphakamisile ubungcali bakhe kwikwayara yecawa. Nge-11, ubomi bukaCam buhlengahlengiswe ngokungapheliyo emva kwevidiyo yakhe ecula ingoma yeBruno Mars yaya kwintsholongwane.
Ukuza kuthi ga ngoku, uchukumisile kwi-Ellen DeGeneres Show kwaye wade waqhuba kwiNdlu yeWhite kuLuhlu lweQanda lwePasika.
U-Anthony watyikitywa nguGqirha Dre kwiminyaka eli-12 evuthiweyo kwaye uyaqhubeka nokukhula kumdlalo okwexesha.
NgoMvulo ngokuhlwa, uBlake wongeze uCam ukuba aziswe ngomdlalo wakhe we-A ngalo lonke ixesha enyathelwa eqongeni. Ngoku, ngumcimbi wexesha lokujonga ukuba ufumene na ukuba kuthatha ntoni ukuphumelela isizini.
Iindlela ezine zokuNkqonkqoza
NgoMvulo ngokuhlwa, uEmma uCaroline Warren uwushiye umboniso emva kokubhengezwa kweziphumo zendlela ezine.
UWarren wakhuphisana ngokuchasene noSavannah Woods, ovela kwiQela uKelly, uDevan Blake Jones, weQela uNick, kunye noCaroline Rial, weQela leQela. Imvumi kaJonas, uDevan Blake Jones, wafumana isangqa, ngelixa iimvumi ezintathu ezichaseneyo zazithunyelwe endlwini.
Xa uWarren Uthethe ne-AL.com malunga nexesha lakhe kumboniso, wabelana, ndikhule kakhulu njengegcisa, nangona kunjalo ndiyakholelwa into endizakuyithatha endlini kunye nam kukufundela ukuzicingela.
Ilizwi iya kuqhubeka emoyeni ngoMvulo nangoLwesibini ebusuku ngo-8pm ET / PT kwi-NBC.
Izigaba: Hollywood Umqala Iwiki
lilitye le-curtis elitshatileyo
Ixabiso leJason yosuku
UDave noJenny marrs ukwamkelwa
abagcini bomnyele we-2 ophambili
Umboniso omkhulu wokubhaka waseCanada